ဆားကစ်ဘုတ်စည်းဝေးပွဲကို Smt နည်းပညာ Smt စည်းဝေးပွဲကိုမျက်နှာပြင်-mount နှင့်အပေါက်စည်းဝေးပွဲကိုနှစ်ဆတဖက်သတ်ရောထွေး PCB စည်းဝေးပွဲကိုမှတဆင့်ပုံနှိပ် Smt အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အမြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရသော - နည်းပညာ Smt စုဝေးပေါက်စည်းဝေးပွဲကိုတစျဆငျ့ကို double တဖက်သတ်ရောထွေး PCB စည်းဝေးပွဲကိုပေးသွင်း Smt အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်စည်းဝေးပွဲကို Smt မျက်နှာပြင်-mount အဘို့တရုတ်အဆင့်မြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော,စက်ရုံ -WMD
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » ညီလာခံ PCB
Gerber နဲ့ BOM အပေါ် အခြေခံ.
လေဟာနယ် အထုပ်,10PC များ / အိတ်, ပျဉ်ပြားအကြားပူဖောင်းအိတ်သို့မဟုတ်ပုလဲဝါဂွမ်း
4 အလွှာ PCBA ဘုတ်အဖွဲ့
တင်းကျပ် FR4 PCBA
ပရိသတ်၌ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့တစ်ဦး functional ဖြစ်စေပုံနှိပ်တိုက်နယ်စည်းဝေးပွဲဖွဲ့စည်းရန်အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုနှင့်အတူလူနေထူထပ်နေပါသည် (PCA), တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးကိုခေါ် "ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ပရိသ" (PCBA). မှတဆင့်-တွင်း၌နည်းပညာအစိတ်အပိုင်းဆောင်တွင်း၌ထည့်သွင်းထားပါသည်. မျက်နှာပြင်-တောင်ပေါ်မှာနည်းပညာ (Smt) အစိတ်အပိုင်းများအတွက် PCB ၏မျက်နှာပြင်များပေါ်မှာ pads သို့မဟုတ်မြေများပေါ်တွင်လျှက်ရှိကြောင်းနေကြတယ်. နှစ်ဦးစလုံးအစိတ်အပိုင်းဆောင်ဂဟေအားဖြင့်ဘုတ်အဖွဲ့မှထို့နောက်နည်းစနစ် fixed နှင့်လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်နေကြသည်မှာတော့.
UPS များကတံခါးကိုပေးပို့ဖို့တံခါးကို, Fedex, TNT သို့မဟုတ် DHL.
ကျွန်ုပ်တို့၏ PCBA ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်, electrical appliances, စားသုံးသူအလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများာနစ်ထုတ်ကုန်, electrical appliances, သေးငယ်တဲ့အိမ်ထောင်စုလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ, ဆက်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အခြားလယ်ကွက် (ထိုကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းဖုန်းအဖြစ်, တယ်လီဖုန်း, LED အလင်းရောင်ကိရိယာများ, တီဗီ, ဒီဗီဒီ, ကွန်ပျူတာထုတ်ကုန်များနှင့်အရံပစ္စည်း, game consoles စ, power adapter, charger �ပါဝါအဒက်er adapter,အိမ်သုံးပစ္စည်းနှင့်ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု ).
တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, လေးအလွှာဘုတ်အဖွဲ့, တောင့်တင်းသော4အလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့.4အလွှာ gloss / shinning အနက်ရောင် 1.0mm ဘုတ်အဖွဲ့.
လူမီနီယမ် PCB2PCB လူမီနီယမ်အခြေစိုက် ENIG 2u Layer" 2အောင်စကို LED လျှောက်လွှာ IMS